U-Ksenia Borodina no-Alyona Vodonaeva bafumana umxhasi oqhelekileyo, isithombe
Ienkwenkwezi zasekhaya ze-Instagram kule nyanga zasebenza ngakumbi kwi-microblogs zazo. Akusiyo imfihlo yokuba ukuthengiswa kumaphepha abo adumile kukufumana imali enhle, kwaye ngexesha elifanayo, kunye nemveliso ngokwawo, epapashwayo.
Uninzi lweentengiso kwi-microblogging Xenia Borodina. Ukhokelo lwababhalisi be-"House-2" baye batyholwa ngokuphindaphindiweyo ngokuba bhengezo kuphela, kwaye baqabana ukuba babelane ngeendaba zakutsha malunga nobomi babo. Nsuku zonke kwi-Xenia Borodina Instagram, iimveliso ezintsha kunye ezintsha zipapashwa.
Uzama ukungahambi emva komhlobo ongaphambili kunye no-Alain Vodonaev. Ngoku kutshanje, kwiblogi yeenkwenkwezi zangaphambili "Izikhundla ze-Doma-2" zenziwa njengama-pie ashushu.
UVodonaev noBorin bagqoke kwi-svitshots efanayo kumxhasi omnye
Kwiinyanga ezintandathu ezedlulileyo, u-Alena Vodonaeva noKsenia Borodina babengabangani. Amantombazana ayehlala ehlangene kunye namaqela angama-stag, agubha iiholide.
Yonke into yatshintsha xa u-Xenia eqala ukuthetha malunga noKurban Omarov owatshintshile ngayo noAlyona Vodonayeva. Ngoko ke okanye akunjalo - akukho "inxantathu yothando" ayizange yamkele, kodwa ukususela ngoko iintombi ziyeke ukuthetha, kwaye zize zingabhalwanga kwiintanethi.
Kodwa, ishishini lushishino. Omnye umthengisi waphuma waya kubahlobo bamandulo, kunye neenkwenkwezi zeTV zakhawuleza zakhawuleza zithumela izithuba zentengiso kwii-microblogs zazo, apho zanikezela ababhalisi babo abaninzi ukuba baqhube kwi-store efunwayo ngokukhawuleza kunokwenzeka kwimveliso emangalisayo:
Ngexesha elifanayo, u-Aliona Vodonaeva noKsenia Borodina bakhawuleza ukubeka i-swiss shots kumthengi onobubele. Ufumana phi - ishishini! 😏
I Krismesi eSochi yadibana neengoma zikaKonstantin Meladze, ifoto
UMikhail Gorbachev oneminyaka engu-86 ubudala "waqhekeza" kwindawo yokutyela eneentombazana eziselula, ifoto
UDmitry Malikov amaphupha okudweba u-Olga Buzova
UNastasya Samburskaya wanikela ikhaya elitsha loNyaka omtsha
Kutheni umntwana enqabe ukubamba
Ukuhlengahlengiswa ekhaya ekhaya
Kuchaneka njani ukuthetha nomntu (iingxoxo kunye neengxoxo)?
I-Pareos: ukuthunjwa kwe-chiffon
Irayisi edibeneyo ne-mache
Iifuni zekhononti ngekhefu etyutywe
Oko abantu bathi malunga nokwenza ngokusisigxina komfazi
Ukuxilongwa kwezifo ngezipikili
Imibuzo ebuzwa ngokuphindaphindiweyo yabantwana abaselula
I-cocktail ye-lime ne-kiwi
Ingulube ibhaka kwi-berry-fill filling
I-SOS-cosmetology: I-TOP-3 ubuchule bezinto ezilungileyo, ukubonelela ngokutsha
Ukusondeza umntwana osandula